May 17, 2019 - CeleLove
ငွေနှစ်ထောင် ချေးခဲ့တဲ့ အကြွေးကြောင့် နွားဘ၀ဖြင့် ပြန်ဆပ်ရသူ ကိုသာမောင် ( တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ )
May 17, 2019 Cele Love 0
ငွေနှစ်ထောင် ချေးခဲ့တဲ့ အကြွေးကြောင့် နွားဘ၀ဖြင့် ပြန်ဆပ်ရသူ ကိုသာမောင် ( တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ ) နွားဘ၀ဖြင့်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း( ၃၀ )ခန့်က ဖြစ်ရပ်မှန်ပါလူတို့သည် သံသရာကြွေးကို ပေါ့ပေါ့လေးထားပြီး မကြောက်တတ်ကြ မိမိတို့ယူထားသော အကြွေးမှန်သမျှ ကျင်လည်ရသည့် ဘဝအဆက်ဆက် ၌နွားခြေရာနောက်ကို လှည်းဘီးပါသလို တကောက်ကောက် […]
တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် ( ၁၅ ) ချက်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် ( ၁၅ ) ချက် (၁)သင် အရမ်းမချော အရမ်းမလှလည်း ရတယ်…ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားနဲ့ တင့်တယ်တဲ့ အလှအပရှိရင် ကျေနပ်ဖို့လို တယ် ။ (၂)ကိုယ်ရဲ့ချောမောလှပမှုအောက်မှာ အသိညဏ်ဆိုတာ ပေါင်းထပ်ထားရမယ်…ဒါမှ […]
ထိုင်းနိုင်ငံကို တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ အလုပ်သွားလုပ်နိုင်အောင် အစိုးရစီစဉ်နေပြီ …
ထိုင်းနိုင်ငံကို တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ အလုပ်သွားလုပ်နိုင်အောင် အစိုးရစီစဉ်နေပြီ … ရန်ကုန် ၊ မေ ၁၁ – ထိုင်းနိုင်ငံကို အလုပ်သွား လုပ်သူတွေအနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အနည်း ဆုံး ကနေ တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ သွားရောက် လုပ်ကိုင် နိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် အစိုးရအနေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြု လုပ်နေ […]
အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး …
အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး … ချစ်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အထီးကျန်တာတွေ၊ အားငယ်တာမျိုးတွေ ခံစားမနေသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သင်တစ်ယောက်တည်းလည်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်လို့ပါပဲ။ အချစ်ဆိုတာ လိုက်ရှာနေရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်တန်တဲ့အခါ သူ့အလိုလိုရောက်လာတာမျိုးပါ။ ဒါကိုနားလည်ပြီး အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် […]
ရေခဲတောင်တွင် ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းဆရာ ပြောပြီ …
ရေခဲတောင်တွင် ပြုတ်ကျသေဆုံးသွားသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းဆရာ ပြောပြီ … ရေခဲတောင်တက်ရာတွင် ပြုတ် ကျသေဆုံးခဲ့ပြီဟု ယူဆနေကြသည့် အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်၍ အထက်လမ်းပညာဆရာ ဘာပြောသလဲ … ကျနော်ကိုယ်တိုင်က သွားဆေးတက်နေပါတယ်။ အလုပ်သင်ဖြစ်တော့မှာပါ။ ခုတတ်မြောက်လိုက်စားနေတဲ့လောကီ ပညာနဲ့ ငွေကြေးလုံးဝမတောင်းဘဲ စစ်ဆေးကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်ခရိယာန်ဘာသာဝင် ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရယ်မခွဲခြားဘဲ လူအသက်ကယ်ကောင်းတော့ ..မြွေကိုက်လူနာ […]
ကျောင်းသူလေးနဲ့ ကားစပါယ်ယာ ၂ ဦးလုံး သေဆုံးသွားရပြီ….
ကျောင်းသူလေးနဲ့ ကားစပါယ်ယာ ၂ ဦးလုံး သေဆုံးသွားရပြီ…. ၂ဦး သေဆုံးပါတယ် … တစ်ဦးက ကျောင်းသူလေး ၊ တစ်ဦးက ကားစပါယ်ယာ ဖြစ်ပါတယ် ….. ။ ၂ဦးလုံး ကားနှစ်စီးမှာ ညပ်နေပြီး ၊ ချောက်ကလာတဲ့ ကားပေါ်မှာ တစ်ဦး ၊ မကွေးက […]
ရှားရှားပါးပါး အဝါရောင်ကိုမှကြိုက်တဲ့သူလေးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ်ထူးခြားချက် (၅) ခု
ရှားရှားပါးပါး အဝါရောင်ကိုမှကြိုက်တဲ့သူလေးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ်ထူးခြားချက် (၅) ခု အဝေါရောင်ဟာ နွေးထွေးမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရောင်ပါ။ အဝါရောင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ ပွင့်လင်းတယ်၊ ခင်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသူတွေပါ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အဝါရောင်ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ ပင်ကိုစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ သူမတူတဲ့ အားသာချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် နော် ….။ (၁) အဝါရောင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ လွတ်လပ်မှုကို အထူးခုံမင်တဲ့သူတွေပါ။ […]
တရုတ်​ရဲမှမြန်​မာဘက်​သို့ထွက်​၍ ဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးရာ အ​ခြေအ​နေပိုဆိုး ( ရုပ်သံ ) …
တရုတ်​ရဲမှမြန်​မာဘက်​သို့ထွက်​၍ ဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးရာ အ​ခြေအ​နေပိုဆိုး ( ရုပ်သံ ) … မေလ ၁၇ နံနက်ပိုင်း … မူဆယ် ဆင်ဖြူဂိတ် မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် ဒေသခံများဆန္ဒပြ … ယခုအချိန်​တွင်​ဆင်​ဖြူဂိတ်​တွင်​မြန်​မာဘက်​မှ ကားများလူများပိတ်​ဆို့၍ တရုတ်​ကားများထွက်​မရ​အောင်​ မူဆယ်မြို့ဒေသခံများဆန္ဒပြ​နေကြပါတ ယ် …။ တရုတ်​ရဲမှမြန်​မာဘက်​သို့ထွက်​၍ ဝင်​​ရောက်​ဖမ်းဆီးရာ အ​ခြေအ​နေပိုဆိုးသွားပါသည်​။လာ​ရောက်​​ဖြေရှင်း​ညှိနှိုင်းပေးမည့် […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူ ယခုနှစ်ကုန်ထုတ်မည်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါ ငွေစက္ကူ ယခုနှစ်ကုန်ထုတ်မည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံပါ ကျပ်ငွေစက္ကူတွေကို အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ နိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ပြောပါတယ် …။ နေပြည်တော်မှာ ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ တတိယတနှစ်တာကာလ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒုဥက္ကဋ္ဌက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် …။ […]
လှိုင်သာယာတွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း ၂ဦးအား မုဒိမ်ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
လှိုင်သာယာတွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း ၂ဦးအား မုဒိမ်ပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ပင်ရွှေထီလမ်းတွင် ဖင်ခင်ဖြစ်သူမှ သမီးအရင်း(၂)ဦးအား သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ် …။ တရားလိုသမီးကြီးမှာ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ အသက်(၁၄)နှစ် အရွယ်ခန့်က မောင်ဖြစ်သူတွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် တစ်လခန့် ဆေးကုသနေစဉ်…. ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် […]